K & umsebenzi F sika "Ukwakha umuzwa kangcono ekhaya"! K & F igcina ekuthuthukiseni ukhululekile, kwemvelo, amandla ukulondoloza, imikhiqizo ephephile ekahle, ukuze uhlinzekele olusha namasiko kangcono futhi zokuphila abantu kanye lula ezinkulungwane zemikhaya ukujabulela ukuphila kujabulise ngokwengeziwe. Phakathi naleso sikhathi, i-K & F ngeke kangcono buyiselani nabasebenzi bayo, abalingani, abanikazi bamasheya nomphakathi. Nokho, i-K & F uyazi ngokucacile ukuthi kuphela lapho imizwa amakhasimende 'ekhaya abe ngcono, ungakwazi ibhizinisi ukuthuthukisa kahle, ukuze imizwa yethu ekhaya kuyoba ngcono kanye!
▪Vision K & F-Ukuze hle lokuqala rate ibhizinisi! 1. Ngezenzo isibopho kwezenhlalo kanye ngokuqinile ukufeza futhi silwele ukuba banqobe ukwehlukana umkhiqizo icala, isisebenzi umthwalo, icala kwemvelo, intela icala futhi njalo; bathobele umthetho wokholo ezinhle, isimilo ibhizinisi izimiso zokuhle sakhe ngekwemiva netenhlalo; kusebenta ngekukhutsala ku Yiqiniso inhlalakahle yomphakathi; 2. Standard nokubusa indlela, avuthiwe ukuphathwa yokusebenza, kakhulu ibhizinisi ukusebenza oluvelele abasebenzi ithimba; ukuba isibonelo futhi model of amabhizinisi Chinese; 3. Yakha sha lokuqala Chinese imikhiqizo ukulawula umlilo ngamazwe ipayipi abadumile uxhumano brand; 4. Ukuzuza win win-isimo namalungu ahlobene: ukwanelisa amakhasimende, abasebenzi, ophathina, imiphakathi kanye bamasheya.
▪Values ​​K & F-Imikhiqizo, inkampani zokuziphatha nobuntu. K & F akufanele kuphela ukunikeza imikhiqizo ohlonipheka kakhulu kumakhasimende, kodwa futhi kufanele ube inkampani ehloniphekayo. Ngaphezu kwalokho, i-K & F kufanele ukusiza izisebenzi zayo sithole ikhono, ubuqotho nempumelelo, ukuze imikhiqizo, inkampani zokuziphatha nobuntu kuzokwenza K & F brand, ukwelekelela nomunye futhi ayikho akusebenzi. Kuphela lapho ezintathu ninyusane kungaba umsebenzi kanye umbono ka K & F igcwaliseke.
▪Spirit K & F-Ukuzinikezela, ukubambisana cwaningo. ukuzinikezela Innovative iyona mthetho wokuziphatha; ukuzinikezela kuyisisekelo sokusinda; ukuzinikezela sizibona umthwalo, usomabhizinisi umoya futhi umqondo umsebenzi; ukuzinikezela kuwukwenqaba ingakuvumeli ukucabangela nokuqhwandela nokuphishekela ubuhle; Ukuzinikela ukwenza okungcono uma uphathiswe into futhi ukuzama ukwenza okulungile ngendlela enhle kakhulu uma kungukuthi uphathiswe into. Ukubambisana, njengoba igama layo lisho, kusho ukubambisana, obhekisela ephakeme ezingeni nokubambisana nokubambisana oqondile. Isifundo kuyadingeka ukuze lokusinda kanye nentuthuko, okuyinto nemfuneko nkathi futhi umthombo emisha. Abasebenzi kufanele kube isifundo-uhlobo individualizes, kuyilapho K & F kufanele babe inhlangano cwaningo ngamakhasimende. Ukuqamba ingukuphila ibhizinisi futhi umthombo sokukwazi ukuncintisana ezingeni lamazwe kanye umgomo oyinhloko we cwaningo. K & F ukhuthaza isiphakamiso ngcono futhi iyiphi ukucabanga engavamile kodwa emangalisayo; K & F ushukumisa mbumbulu zokudala nokufeza yasekuqaleni. K & F kufanele ugcine ekwenqabeleni ngokwayo, ngakho njengoba lidlule kangcono uqobo.
▪Company Philosophy: 1. Style of K & F: Impendulo Rapid futhi isinyathelo ngokushesha! K & F ala izaba. Kulomkhakha wekuvuselela nge jubane, "bese wehlisa" kusho akulutho "elinde ukufa". Ngakho iziphi thina namanje elinde? 3. Izinhlobo ezintathu eyala K & F: Ayikho namasu; akukho ithuba; akukho ukukopela bewumsebenzi futhi izinto! Lezi eyala amathathu ayizinsuku ezintathu unbridgeable isixwayiso imigqa, okuyizinto izidingo eziyisisekelo kakhulu ku lokuziphatha kwabasebenzi K & F, izindinganiso ezibalulekile zobuntu nokuqukethwe ebalulekile yobuqotho. 3. Izinhlobo ezintathu ukwahlulela nendlela eqhuba: ngabe ukuziphatha kuyazuzisa ukuthuthukiswa kwamabhizinisi; ngabe ukuziphatha kunikela ukhulisa ukwethembeka amakhasimende '; ngabe ukuziphatha esivuna ukulinganisa izithakazelo lomuntu ngamunye. 4. Ukucabanga mode K & F: Singabantu umthombo konke! 5. K & ukholo F sika: Singabantu best! 6. K & F sika sengqondo ukusebenza: Khuthala bethu egcwele uthando! 7. K & F sika umqondo ithimba: K & F kuyinto iqembu elilodwa futhi kukhona kuphela "thina", kodwa ayikho "ni-" noma "baba"!